हिन्दु धर्म अनुसार रातको समयमा भुलेर पनि गर्नुहुदैन यस्ता काम !! | सुदुरपश्चिम खबर
हिन्दु धर्म अनुसार रातको समयमा भुलेर पनि गर्नुहुदैन यस्ता काम !!
हिन्दुधर्म अनुसार हरेक कामको आ –आफ्नै समय हुन्छ । जुन समय हाम्रो शास्त्रमै तोकिदिएको हुन्छ । रातमा कुच्चो लगाउदा लक्ष्मी रिसाउने र दरिद्रताको जन्म हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ । यति लाउनै पर्ने अवस्था आयो भने घरबाट निस्केकको फोहोरलाई एउटा भाडोमा वा एक स्थानमा उठाएर राख्ने गर्नुपर्छ । बाहिर फ्याकेमा धनकी देवी लक्ष्मी रिसाउँछिन् ।
कुच्चो बिहानको सुर्यदय भएको समयमा लगाउनुपर्छ । किनकी शास्त्रमा बिहान सुर्यदयको समयमा सबै देव देवताहरु पृथ्वीको भ्रमणमा निस्केका हुन्छन् । यस्तो बेलामा आफ्नो घरआँगन सफा राखेमा देव देवताको बास हुने र लक्ष्मी माताले सधै साथ दिने बताइएको छ । यदि बिहान कतै जादा कसैले कुच्चो लगाएको देख्नु भयो भने यो शुभलाभको संकेत हो ।
बिहानको समय ४–३० देखि ५–३० सम्मको समयमा तपाईले घरमा कुच्चो लगादै गर्दा तपाईको घरमा गौमाता अर्थात गाई आइन् भने तपाईको घरमा लक्ष्मीको वर्षात हुन्छ । तर घरको झाडु , पोछा तथा कुच्चो बिहान सुर्यदयको समयमा नै लगाउनुपर्छ ।चुच्चो किन्दा कृष्ण पक्षको शनिबार पारे किन्दा घरमा आर्थिक संकट हट्ने, राम्रा कार्यको थालनी हुने गर्दछ । भाँचिएको कुच्चो, सानो भएको कुच्चोको प्रयोग गर्नु हुदैन र यस्तो कुच्चो घरमा राख्नु राम्रो मानिदैन ।
कुच्चे राख्दा कसैले नदेख्ने ठाँउमा राख्नुपर्छ । यदि तपाईले लुकाएर राखेको कुच्चो तपाईको सानो बच्चाले भेटि कुच्चो लगाएमा यसलाई शुभ मानिन्छ । कुच्चोलाई भान्सा कोठामा, भण्डार कोठामा तथा पैसा तथा धन राख्ने दराजसँग जोडेर राख्नुहुँदैन । यस्तो गरेमा लक्ष्मी माता रिसाउँछिन् । कुच्चो लक्ष्मी माताको प्रतिक हो । (gnewsnepal.com बाट सभार)